Film ay jilayaan soomaali oo maanta lagu daahfurayo shaleemooyinka magaalada New York: VIDEO
Maanta oo ay taariikhdu ke beegan tahay 21-Oktobar waxaa shaleemooyinka magaalada New York lagu soo bandhigayaa film cusub oo ay soomaali jishay kaas oo lagu magacaabo “STRAY”. Halkan ka daawo goos-gooskiisa.
by calanka —	October 21, 2016 —	Video
Maxaad kala socotaa silica soomaali ka marto tahriibka?: SAWIRRO
Waxaad maqashaa uun “Hebel waa tahriibay, heblaayo waa tahriibtay”, balse ma ogtahay qaxarka ay ka maraan tahriibka dhallinyarada soomaaliyeed? Sawirradan waxaanu ku iftiimineynaa halista tahriibku leeyahay.
by calanka —	October 21, 2016 —	Sawirro
Wali ma aragtay burcad ka nasiib xun kan?: VIDEO
Burcad ku hubeysan bastoolad ayaa waxaa uu damcay in uu dhoco dukaan lagu iibiyo sigaarka iyo tubaakada, balse waxa uu halkaas kala kulmay dhacdo uusan waligiis iloobeyn.
Donald Trump oo lagu tumay dooddii xalay: SAWIRRO
Musharrax Donald Trump ayaa diiday ballanqaadida in uu aqbalayo natiijadda doorashada bisha soo socota ka dhici doonta Maraykanka, xilli uu dood kulul la yeeshay xalay Hillary Clinton.
by calanka —	October 20, 2016 —	Sawirro
Garsoore xukumay daroogiiste El-Chapo Guzman oo la dilay: VIDEO
Dalkaasi Mexico waxaa dariiq maalin cad lagu dilay garsoorihii saddexaad ee xukumay maxkamadda lagu qaaday daroogiistaha caanka ah ee El-chapo Guzman.
by calanka —	October 20, 2016 —	Video
Qiso qosol badan oo dhex martay burcad wax dhacayay iyo ninkii la dhacayay: VIDEO
Qiso cajiib badan ayaa waxaa ay ka dhacday goob gawaarida lagu dhaqo oo ku taal magaalada Barcelona ee dalkaasi Spain halkaas oo nin burcad oo in uu wax dhoco usoo galay meesha isaga lagu dhaqay gawaarida.
Maxaad kala socotaa nolosha qoysaska ku nool buundooyinka hoostooda?: SAWIRRO
Caasimadda dalka Indonesia ee Jakarta ayaa waxaa ku noon kumannaan dadweyne aan hoy haysan kuwaas oo guryo macmal ah ka sameystay buundooyinka hoostooda iyo meelo kale oo danguud ah.
by calanka —	October 19, 2016 —	Sawirro
Naftii-hure ka naxsaday ciidamada Ciraaq ee duullaanka ku qaaday magaalada Mosul: VIDEO
Ciidamada dalka Ciraaq ayaa maalin ka hor waxaa ay duullaan saf-ballaran ku qaadeen kooxda ISIS ee haysata magaalada Mosul oo ah caasimadda labaad ee Ciraaq. Halkaas ayaa waxay kala kulmeen iska-caabin xoogan oo dhanka ISIS ah.
by calanka —	October 19, 2016 —	Video
Dagaalka kareemka oo ka dhacay jaamac ku taal Skottland: SAWIRRO
Caado-dhaqameed soo jireen ah oo muddo 600 oo sano ka hor soo bilaabantahay islamarkaana sanadkiiba mar ay ardayda jaamacadda St. Andrews qabsadaan ayaa waxaa ay ka dhaacday dalkaasi Skottland.
by calanka —	October 18, 2016 —	Sawirro
Wariye halis gashay naftiisa isaga oo soo warinaya duullanka magaalada Mosul: VIDEO
Wariye u shaqeynaya taleefishinka CNN oo lagu magacaabo Nick Paton Walsh ayay naftiisa halis gashay kaddib markii ay rasaas ooda uga soo qaadeen kooxda ISIS goob furinta ah oo uu kasoo warinayay warbisib ku saabsan duullaanka magaalada Mosul.
by calanka —	October 18, 2016 —	Video